जान्नुस,हाम्रा मन्त्री सांसदको शैक्षिक योग्यता,कस्को कति ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home शिक्षा जान्नुस,हाम्रा मन्त्री सांसदको शैक्षिक योग्यता,कस्को कति ?
पहिलो पटक ग्रेडिङ सिस्टममा एसएलसीको नतिजा सार्वजानिक भइरहँदा हामी खोजीमा लाग्यौं यो देश र जनताको उज्ववल भविष्य बनाउन कम्मर कस्सेर लागेका राजनेताहरुको शैक्षिक योग्यता चाहिँ कति ?
यस्तो भेटियो प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री सहित केही मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्रै उतिर्ण । १० प्रतिशत सांसद एसएलसी समेत उत्र्तीण नगरेका, एसएलसी उतिर्ण नै नहुने ५८ जना रहेछन । त्यस्तै एसएलसी पास गर्ने ५४ जना,प्रमाणपत्र तह अथवा प्लस टु गर्ने ९७ जना, स्नातक तह उतिर्ण एक सय ९७ जना ,स्नातकोत्तर तह उतिर्ण एक सय ३९ जना रहेछन । र, विद्यावारिधि गर्ने १६ जना छन् । ३७ जना सांसदले संसदमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता समेत उल्लेख नगरी बिवरण उपलब्ध गराएका भेटिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्नातक तहसम्म मात्रै पढेकी छिन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राजनीति शास्त्रमा स्नताक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसएलसी भन्दा बढी पढेका छैनन् ।सभामुख ओन्सारी घर्ती दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा– २ बाट निर्वाचित् भएकी थिइन् । उनको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्र हो । उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका छन् ।
त्यस्तै एमाले कोटाबाट उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भएका भीम रावलले स्नातककोत्तर गरेका छन् । वन तथा भूसंक्षण मन्त्री अग्नी सापकोटाले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन । यता, अर्थमन्त्री भएका बिष्णु पौडेलले संसद सदस्य परिचय पुस्तिकामा आफ्नो शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरेका छैनन् । तर, उनले एसएलसी मात्रै उतिर्ण गरेका छन् । पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले स्नातककोत्तर अध्ययन गरेका छन् त्यस्तै पशुविकास मन्त्री शान्ता मानवीले सदस्य परिचय पुस्तिकामा आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाएकी छैनन् । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तथा कानूनमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले कानूनमा स्नातक गरेका छन् । उनी बरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् ।
यि हुन एसएलसी पास नभएका सांसदहरु
अमरसिंह पुन, अमेरिका कुमारी, अमृत बोहरा, इन्द्र झा, उषा गुरुङ, कमला देवी महत्तो, कमला दोङ, कल्पना सोब, चन्द्रबहादुर गुरुङ, जन्नतन निसा धुनिया, दिलशोभा धुनिया, दुर्गा खुना, देवकरण कलावार, धना पहरी, पुनाराम थापा प्रमिला देवी दास, फुलझिरी देवी, महेन्द्र कुमार लिम्बु, राजकुमारी गदेरिया, रामअवतार पासवान, राममाया बोगटी, रेशमबहादुर बोगटी, ललितजंग शाही छन् । त्यस्तै लक्ष्मी देवी भण्डारी, लिला कोइराला, बिचारी यादव, शान्तीदेवी चौधरी, साबित्री चौधरी, सुवर्ण ज्वारचन, सोनिया यादव, श्रीकान्त पासी, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, ज्ञानबहादुर भुजेल, ज्ञानुदेवी गैरे लगायत सांसद एसएलसी पनि उत्तीर्ण छैनन् ।